प्रिती आलेको “लरिलै बरिलै” तिज गीत मा युवतीहरुको यो डान्स भयो रातारात भाइरल यस्तो के छ? ( हेर्नुहोस भिडियो ) – Taja Khawar
प्रिती आलेको “लरिलै बरिलै” तिज गीत मा युवतीहरुको यो डान्स भयो रातारात भाइरल यस्तो के छ? ( हेर्नुहोस भिडियो )
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ३०, २०७८ समय: १९:२२:५७
July 14, 2021sundarन्युज
काठमाडौं / पछिल्लो समयको सांगितिक बजारमा नेपाली लोक गित संगित चर्चा परिचर्चामा रहेको छ । समस्त लोक दोहोरी गित सबै दर्शक स्रोताको नजरमा लोकप्रिय भन्दै गएका छन् ।
कति गितहरुले त करोड क्लव प्रवेश गरिसकेका छन् त कति गर्ने बालामा छन् । यसै सन्दर्भ बजारमा धेरै सर्जकले आफ्नो गित दर्शक स्रोतामा पठाएका र कयौ माया पाएका छन् ।
लोक तथा दोहोरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरेर गीतहरु आउनेक्रम बढेको छ । मायाप्रेम र बिछोडले भरिएका गीतहरु दैनिकजसो बजारमा आईरहेका छन् ।
त्यसो त रमाईला, नचाउने किसीमका गीतहरुपनि बजारमा आईरहेका छन् तर बढिजसो मायाप्रेमका गीतहरु आउने गर्छन् कारण यस्ता गीतलाई दर्शकश्रोताले रुचाउछन् ।
नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा एकपछी अर्को गर्दै निकै उत्कृष्ट गीत संगीत बजारमा आइरहेका छन् । सोहि क्रममा नेपाली नारीहरुको महान् पर्व हरितालिका तिज नजिकिए संगै कलाकारहरुले तिज गित बजारमा सार्वजनिक गरिरहेका छन् | यसै विच लोक प्रिय गायिका प्रीति आलेको ‘साेल्टी राजाकाे टुम्लेट’-फरिया-२ सार्बजनिकभएको छ ।
सार्बजनिक भएको केहिदिनमै चर्चा बटुल्दै छ भनेपछिल्लाे समय काेराेनाकाे माहामरीले गर्दा गीत संगित क्षेत्रमा केहि समस्या देखिरहेकाे छ । तर भने नेपाली कलाकार र गायकहरुले यस्ताे काेराेनाकाे माहामारीकाे बेलामा पनि दर्शकहरुलाइ केहि मनाेरञ्जन दिनका लागि भएपनि केहि नाैलाे प्रस्तुतीहरु सधै साभार गरिरहेका छन् ।
साेल्टी राजाकाे टुम्लेटले छाेटाे समयमा दर्शकहरु निकै माया पाएकाे छ । उक्त गीतमा दर्शकहरुले निकै राम्राे प्रतिकृयाहरु दिएका छन् ।प्रितीले दर्शक माझ केहि बिशेष ल्याउन चाहेकाे बताएकि छिन्। । किन किन प्रिती भनिन्छिन्, दर्शकहरुलाइ हामीले प्राय फरक फरक किसिम्मका भिडियाेहरु सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरेकाे बताएकि छिन् ।
त्यसैगरी प्रितीकाे भनाइ अनुसार, याे भिडियाेमा केहि फरक शैलीहरु प्रबेश गरेर बनाएकाे बताएकि छिन् । हालै उनले टिमले सार्वजनिक गरेकाे गीत साेल्टि राजाकाे टुम्लेट सार्वजनिक भएकाे छ ।
Last Updated on: July 14th, 2021 at 7:25 pm